ओलीको फोन, “माधवजी बालुवाटार भेटौं, हैन धुम्बाराही आउनुस ! हस “ « Ok Janata Newsportal
ओलीको फोन, “माधवजी बालुवाटार भेटौं, हैन धुम्बाराही आउनुस ! हस “
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव नेपालबीच आज बिहान ११ बजे धुम्बाराहीस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा भेट हुने भएको छ ।
माधव नेपालसँग भेट्ने तयारी गर्नुपूर्व ओलीले आइतबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीबीच डेढ घण्टासम्म छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफल सकिएपछि ओलीले नेपाललाई फोन सम्पर्क गरेका थिए । उनले फोनमा नेपाललाई भेटका लागि बालुवाटार बोलाएका तर नेपालले बालुवाटार जान अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यसपछि नेपालले धुम्बाराहीमा भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सुरुमा ओलीले एक्लाएक्लै भेट्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनीनिकट स्रोतले शिलापत्रलाई बतायो । त्यसपछि केही नेतासहित ओ‌ली र नेपालबीच भेट हुन लागेको हो ।
ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत् अध्यक्ष र महासचिवबाहेकका सबै पदाधिकारी हटाएका थिए । आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीले यस्तो निर्णय लिएका थिए । उनले खनाल-नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी पनि खोसेर आफू निकटका नेताहरूलाई दिएका थिए ।
ओलीले आफू पक्षीय नेतालाई पदच्युत गर्दै कमिटी विस्तार गरेपछि खनाल-नेपाल समूहले पनि त्यसलाई चुनौती दिँदै सात प्रदेशका इन्चार्जसहित विभिन्न विभागको समानान्तर जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
जसअनुसार प्रदेश- १ को संयोजनको जिम्मा भीम आचार्यलाई, प्रदेश- २ को घनश्याम भुसाललाई, बागमती प्रदेशको अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई, गण्डकी प्रदेशको जिम्मा सुरेन्द्र पाण्डेलाई, लुम्बिनी र कर्णालीको जिम्मा युवराज ज्ञवालीलाई र प्रदेश ७ को जिम्मा भीम रावललाई दिइएको छ ।
खनाल-नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गतेका लागि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ ।